sanjay dutt | Ratopati
के सञ्जय दत्तको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो ? सार्वजनिक भयो यस्तो तस्बिर access_timeअसोज १९, २०७७
भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्त क्यान्सरद्वारा ग्रसित छन् । हालै सोसल मिडियामा उनको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भएको छ, जुन हेरेर थुप्रैले उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको आँकलन गरेका छन् । धेरैले उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेका छन् । यीमध्ये एक प्रयोगकर्ताले लेखिन्, ‘बाबा...
सञ्जयले सुरु गरे फिल्मको सुटिङः नायकको रोगका कारण सेटमा कडा सुरक्षा, सबैको भयो कोरोना परीक्षण access_timeभदौ २३, २०७७
अभिनेता सञ्जय दत्तले सोमबारबाट फिल्म शमशेराको सुटिङ सुरु गरेका छन् । यशराज स्टुडियोको स्रोतलाई उद्धृत गर्दैै भारतीय सञ्चार माध्यमले यसको पुष्टि गरेको छ । यसैबीच शमशेराको सेटबाट सञ्जयको तस्बिर पनि सार्वजनिक भएको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण र सञ्जयको रोगका कारण सेटमा सुरक्षा...
आलियाको ‘सडक टु’ लाई रेकर्डस्तरको ‘डिसलाइक’ किन ? access_timeसाउन २९, २०७७
सञ्जय दत्त र आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘सडक टु’ को ट्रेलर बुधबार बिहान रिलिज भयो र रिलिज भएको केही घण्टा भित्रै यसले युट्युबमा हज्जारौं डिसलाइक पायो । ठूलो ब्यानरका, अझै त्यसमाथि ठूल्ठूला कलाकारको नाम भएका फिल्मको ट्रेलरले डिसलाइकभन्दा लाइक बढी पाउँथ्यो । ...
‘सडक २’ सञ्जय दत्तको एक्सन अवतार access_timeसाउन २८, २०७७
मुम्बई । निर्देशक महेश भट्ट फिल्म ‘सडक २’ सोशल मिडिया रिलिज गर्ने तरखरमा छन् । फिल्मको ट्रेलर समेत रिलिज गरिएको छ । ट्रेलरमा संजय दत्तकी पत्नी पूजा भट्टको निधन भैसकेको छ । पूजाको मृत्यपछि संजयको साथमा जिन्दगी जिउनुको खास कारण पनि रहेन । उनी आफ्नो बच...
भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्तलाई क्यान्सर access_timeसाउन २८, २०७७
एजेन्सी । भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्तलाई फोक्सोको क्यान्सर (चरण ३) भएको छ । ६१ वर्षीय अभिनेता दत्तलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको पुष्टि भएसँगै उनी उपचारका लागि अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । सञ्जयलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको उनका एक घनिष्ट मित्रलाई उदृत गर्दै दैनिक भास्करले समाचार ...
सञ्जय दत्त अस्पतालमा, परिवार ४ महिनादेखि दुबईमा access_timeसाउन २५, २०७७
एजेन्सी । मुम्बईका लिलावती अस्पतालमा भर्ना भएका भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्तको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भएको छ । उनी एक दुई दिनभित्रै डिस्चार्ज हुने जनाइएको छ । सञ्जयको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आइरहेको उनका घनिष्ठ मित्र फिल्म निर्देशक अजय अरोडाले जानकारी दिएका छन् । शनिबार र...
भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्त अस्पताल भर्ना access_timeसाउन २४, २०७७
एजेन्सी । भारतीय फिल्म अभिनेता सञ्जय दत्त अस्पताल भर्ना भएका छन् । अभिनेता दत्त मुम्बइएको लिलावती अस्पतालमा शनिबार भर्ना भएका हुन् । ६१ वर्षीय अभिनेता दत्तलाई शरीरमा अक्सिजनको कमी भई अस्वस्थ भएलगत्तै अस्पताल भर्ना गरिएको हो । अस्पताल भर्ना गरिएलगत्तै उनको कोभिड १९ परीक्षण गरि...
रिया चक्रवर्ती पक्राउ पर्ने सम्भावना, सञ्जय दत्तको मुद्दा लडिसकेका वकिलसँग कानूनी मद्दत लिँदै access_timeसाउन १४, २०७७
सुशान्त सिंह राजपूतकी कथित प्रेमिका तथा अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीमाथि धोका दिएको र आत्महत्या दुरुत्साहनका लागि एफआइआर दर्ता भएपछि उनी पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेको छ । बिहार प्रहरी बुधबारदेखि मुम्बईमा डटिरहेको छ । यो मामिलामा रियासमेत ६ व्यक्तिविरुद्ध एफआइआर दर्...
के रेखाले सञ्जय दत्तसँग गरेका थिए विवाह ? खबर सुनेर अचम्मित भएको थियो बलिउड access_timeजेठ १५, २०७७
बलिउड फिल्मले जति धेरै चर्चा पाउँछ त्यति नै त्यहाँका किस्सा पनि चर्चित हुनछन् । विशेषगरी नायक–नायिकाबीचको प्रेम सम्बन्ध धेरैजसो हेडलाइनमा छाइरहन्छन् । कुनै जमानाकी नायिका रेखा पनि यो मामिलामा अपवाद छैनन् । अमिताभ बच्चनदेखि अक्षय कुमारसम्म थुप्रै नायकसँग उनको नाम ...
शाहरुख खान र संजय दत्तमाथि बबाल भएन, शाहिदको पछाडि चाँही किन ? access_timeअसोज ५, २०७६
मुम्बईमा आयोजित इन्डिया टुडे कन्क्लेभ सन् २०१९ मा नायक शाहिद कपुरको उपस्थिती रह्यो । उक्त कार्यक्रममा उनले आफ्नो व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवनबारे कुरा गर्नुका साथै आफ्नो विवादित तर सुपरहिट फिल्म कबिर सिंहबारे पनि चर्चा गरे । शाहिदलाई ‘के यो फिल्ममा केही यस्ता दृश्य ...